Umzi mveliso waseNut-Abavelisi baseTshayina baseTshayina, abaThengisi
Ubunzima bamandla aphezulu
Ukuntywila kwidig-Anti-the ...
I-hexagona eshushu-idiphu ...
Olu hlobo lwe-Hexagon Flange Nut ikwabizwa ngokuba yi-pad nati, intyatyambo - izinyo lamazinyo, intsholongwane yeflange nokunye. Ihlala isetyenziselwa ukunxibelelana kombhobho okanye iziqwenga zomsebenzi ezifuna ukonyusa umphezulu we-nati. Yenziwe ngeprimiyum ngezinto ezintle ezenziwe kakuhle. Sisibambiso esineentambo zangaphakathi kwaye sisetyenziswa ngokudibeneyo kunye neebholithi, kwaye ingasetyenziswa njengenxalenye yoomatshini osetyenziswayo ngokudibeneyo nesikere ukudlulisa intshukumo okanye amandla.
Olu hlobo lweCarbon iron Zinc Plated Square Nut lwenziwe ngexabiso eliphakamileyo lekhabhoni enomsebenzi olungileyo. Umphezulu wayo uqingqwe ngomaleko we-zinc kwi-aesthetics kunye nokuthintela ukugqwala. Ihlala isebenzisana nee-bolts (i-studs okanye i-screws) ngentambo yangaphandle kwaye isebenzisa uqhagamshelo lwentambo lwangaphakathi nolwangaphandle ukwenza ngokukhawuleza izinto ezimbini ezidibeneyo, izinto, njl. Xa udibana kwaye ususa indalo yeCarbon Zinc Plated Square Nut ngomngxunya, akukho lula tyibilika, kodwa ungasebenzisa kuphela i-wrench eguqukayo, ispanner eswelekileyo, injongo eyimbini (ukuvulwa), okanye umngxunya wesikwere somngxunya wesikhephe sokudibana kunye disassembly.
Yintoni i-nylon yokutshixa i-nut: oku kuxhomekeka kwilinki ye-nylon ekusebenzeni kokutshixa i-nut, i-nylon yokutshixa i-nut, umzi mveliso ubizwa ngokuba "cap.Ngoba ikakhulu sisikroba esenziwe ngemisonto okanye isixhobo sokufaka i-bolt, njenge-nylon emva kokutshixa umsesane uya kuba ngaphandle Ubume, ezi ziphelo zibini zokugqitywa kokuvalwa kwezithuba, oko kukuthi ukuvala isiphumo.
Igama leMveliso welding nati Model Number M4-M36 Material: Carbon Steel grade 4.8 8.8 Thread coarse, fine
Hex nut DIN985 DIN982 DIN934 Matera Carbon iron Surface unyango Pla, zinc ipleyiti (mhlophe, tyheli), oxide emnyama Ubungakanani M3-M56 Ibakala 4.8 8.8 Isampulu Singabonelela isampulu yasimahla ye-MOQ 1 TON / ngokweemfuno zabathengi bePackage Carton, ipallet yexesha lokuhlawula T / TL / C UkuHanjiswa kwexesha malunga ne-15 ukuya kwezi-30 okanye kwimihla yexabiso I-USD ngeTon FOB / CIF / CFR / ExW Enzuzo siyimveliso yeDIN934 hex n ...
Amandla aphezulu enz
Igama leMveliso amaNqanaba aMandla aNqabileyo amaNqabileyo e-M2-M100 yeCarbon yensimbi okanye njengeemfuno zakho. IBakala lesiBanga: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Umgangatho ogqityiweyo weThafa, udlulile, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, Njengeemfuno zakho. Umgangatho oqhelekileyo we-DIN GB ISO JIS BA ANSI Certification ISO9001, SGS, CTI, ROHS-O-non-standard OEM iyafumaneka ukuba unika umzobo okanye isampuli.
I-ADDRESSIndawo yeNdawo yeDongmingyang, iSithili saseYongnian, isiXeko saseHypan, kwiPhondo laseHebei
UKUSEBENZA IXESHA08:30 ~ 17:30 Moday to Saturday